SIDA LOO KEYDIYO KAROOTADA QABOOJIYAHA: MID CUSUB, LA KARIYEY, DIIRAY AMA KUURIYA, IYO SIDOO KALE SIDA LOO DIYAARIYO SI HABBOON SI AYSAN U NOQON MID JILICSAN OO AAN KU DHUFAN DHAMMAAN JIILAALKA? - KHUDRADDA
Qarsoodi oo kaa caawin doona inaad ku kaydiso dabacasaha qaboojiyaha si aaney ufududayn oo aan loo dhicin
Karootada waa khudradda caanka ah ee ugu caansan adduunka. Dalagga xididgan wuxuu leeyahay dhadhan wanaagsan, sidoo kale waxaa ka buuxsamey fitamiino iyo macdan oo si wax ku ool ah u saameeya caafimaadka bini'aadamka.
Karootada waa mid ka mid ah khudaarta ku jirta xayawaan kasta oo sanadka oo dhan ah. Sidee loo keydiyaa karootada xilliga jiilaalka? Jawaabta waa in la hubiyo in kaydinta ku habboon jiilaalka ee guriga (hababka ugu fiican ee kaydinta, xeerarka qashinka iyo diyaarinta khudradda, halkan ka akhriso).
Si loo dhigo karootada qaboojiyaha, waa muhiim in la xalliyo. Guryaha waqti-dheer ee guri dabaq ah, kaliya mirahaas ayaa loo diraa oo dhan, caafimaad leh oo si fiican u dillaacsan (noocyo nooca dabiiciga ah ayaa ugu fiican wakhtiga qaboobaha xilliga qaboobaha, halkan ka akhriso).
Ka dib markii loo mariyo dabacasaha, waxaa lagama maarmaan ah in loo diro meel mugdi ah oo qabow dhowr maalmood - qaboojiye, oo leh heerkulka iyo qoyaanka (sida loo dhigo dabacasaha kaydka, akhriso alaabtayada). Tani waxay xajin doontaa khudradda cusub, casiir leh oo caafimaad leh.
Karootada waxaa lagu keydin karaa wixii ka dambeeya shuruudaha diyaarinta kaydinta iyo baakadka., adoo raacaya xaaladaha heerkulka iyo qoyaanka.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo diyaariyo dabacasaha loogu talagalay kaydinta xilliga qaboobaha, halkan ka akhri.
Intee in le'eg ma waayi doonto?
Ilaa intee le'eg ee dabacsan, weli cusub iyo firfircoonaan, iyo, haynta guryaha oo dhan, waxay kuxirantahay qaabka ay ku jirto qaboojiyaha ama qaboojiyaha iyo tallaabooyinka la raaci doono tan.
Qoraalka. Dalagyada beeraha waa in aan la maydhin ka hor inta aan loo dirin qaboojiyaha, ka dibna ku dhajiyay polyetylen, waxay socon doontaa illaa 1-2 bilood, laakiin haddii la dhaqo, nolol maalmeedku waxay ku koobnaan doonaan 1-2 toddobaad (taas oo ah qaabka ugu wanaagsan ee lagu keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha - maydhay ama wasakhaysan, iyo sidoo kale sida loo sameeyo, halkan ka akhriso).
"Kobanheeg" karootada waa khudaar cusub oo dufan leh oo xawaash khaas ah leh, ka dib markii ay ku jirto basbaaska gaduudka, khal, milix iyo sonkorta ayaa lagu daraa masskan si ay u dhadhamaan, ka dibna ku shubay saliidda cuntada kulul.
Mudo intee leeg ayaad ka dhigi kartaa karootada Korean? Maadaama aysan ku jirin maaddada halista ah, tani waxay soo jeedineysaa in saladh ma dhaqaajin doono si dhakhso ah mana khatar galin doono caafimaadka.
Intaa ka sokow, ka dib karinta, karootada Kuuriya waxay leedahay nolol shelf oo qaboojiye ka hor inta aan la iibin ilaa hal maalin. Tani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in alaabtu ay jirto. Haddaba intee le'eg karootiga Kuuriya ee la keydiyay? Ka dib marka la dhamaystiro geedi socodka karinta oo dhan, mudadani kama badna laba toddobaad.
Haddii aad karisid karootada, ka dibna khudradda ayaa si buuxda u dhameyn doonta alaabta taas oo ah natiijo u muuqata in ay dhaqso u dhacdo. Intee in le'eg ayaad ku kaydin kartaa khudradda la kariyey ee qaboojiyaha iyo ma lagu kaydiyaa dhammaantood? Haa, laakiin sida caadiga ah, eraygu waa inuusan ka badneyn laba maalmood. Marka kaydinta wax ka badan xilliga la rabay - karootada waxay bilaabmaysaa inay sii xumaato, tanina waxay muujinaysaa jilicsanaanta iyo dhejinta xuubka xabka.
Juice carrot waa qani ku ah keratin - wuxuu xoojiyaa sifooyinka jirka ee jirka aadanaha, sidaas darteed faa'iido leh dadka waaweyn iyo carruurta. U diyaargarowga casiirka guriga waa sahlan yahay haddii aad leedahay hargab ama midab. Imisa ayaad ka bixi kartaa casiir dabacasaha cusub? Maadaama aysan haysan taariikh taariikhda dhicin, waa in la cunaa isla markiiba ka dib diyaarinta.
Haddii kaydinta si kastaba ha ahaatee loo baahan yahay, taas oo ah kiis khatar ah, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba ku shubeyso casiir cusub oo ku rid weel qaboojiye kuna rid qaboojiyaha.
Si aad uhesho karootada jiilaalka oo dhan guriga, waxaad u baahan tahay inaad ku riddo sanduuqyo gaar ah oo khudaarta ku jira qaybta hoose ee qaboojiyaha ama qaboojiyaha. Dalagyada beeraha waa in la doortaa sida cusub oo dhan oo dhan. (sida loo ilaaliyo karootada cusub ilaa guga, waxaad halkan ka akhrisan kartaa).
Caawin Heerkulka ugu fiican ee kaydinta waa heerkul joogto ah laga bilaabo 0 ° C ilaa 10 ° C, iyo sidoo kale qoyaan kor u kaca waa lagama maarmaan.
Marka labadan shuruudood la buuxiyo, wakhtiga kaydinta khudradda waa 2 bilood illaa sannadkiiba sanduuqyada alwaaxda ama bacaha.
Dabocase ma u baahan yahay in la dhaqo ka hor inta aan la kaydin ka hor inta aan la dhigin ama aan la dhigin? Haa, laakiin ka dib marka ay lagama maarmaan tahay in la qalajiyo khudradda cagaarka dhawr saacadood gudahood, kadibna ku rid bacaha balaastigga ah. Heerkulka kaydinta ee qaybta cusub ee habboonaanta ayaa u fiicnaanaya ilaa 6 ° S.
Si loo keydiyo khudaarta cagaaran ee qaboojiyaha leh heerkul ah -18 ° C ilaa -23 ° C, xitaa ka sii fiican 35 ° C, waa in loo baahan yahay in laga shaqeeyo.
Ma u baahanahay inaan maydho?
Ku ilaalinta khudradda qaboojiyaha ee la dhaqay ama isla markiiba beerta ayaa ah arrin muran dhalisay oo qof kasta uu doorto (sida loo keydiyo karootada - maydhin ama wasakhaysan, waxaad ka heli kartaa halkan). Waxaa jira dhinacyo fiican oo xun oo ah kaydintaas.
Ku dhaqida rootiga cayayaanka ayaa kuu ogolaanaya inaad aragto dhammaan cilladaha ku yaala, sidaas darteed u qaybinta dabacasaha wanaagsan - waxay geli doonaan kaydinta dheer ee qaboojiyaha iyo waxyeelo - waa la wada baabbi'in doonaa marka hore.
Dhaqidda karootada, ma aha oo keliya in wasakhda la dhaqo, laakiin sidoo kale dhammaan noocyada jeermi-dilka ah ee ku jira, taas oo yaraynaysa nolosha shafka iyadoo waxyeeleynaysa dalagga.
Inta lagu jiro kaydinta dheer - karootada dhaqday way fududahay in la arko oo la xalliyo fiicnaanta laga bilaabo kan bilaaba inuu sii xumaado.
Haddii beergooyinku ay ballaadhan tahay, markaa waa wax aad u adag oo waqti badan qaata, sababtoo ah marka hore waxaad u baahan tahay inaad dhaqdo miraha geedka oo dhan, kadibna waxaad u baahan doontaa inaad qallajiso wakhti dheer si aad uga fogaato bakhti-bilowga.
Waxaa loo baahan yahay in lagu keydiyo karootada lagu dhaqo shuruudo gaar ah, tusaale ahaan, sanduuqyo gaar ah ama sanduuqyo alwaax ah, iyo sidoo kale dambiilooyin kala duwan, halka ay ka fogaanayaan xiriirka dabacasaha maydhay oo aan la karin.
Xaqiiqda ah in dabacasaha la maydhi karo ka hor inta lagu kaydin waxaa lagu sharxay faahfaahin dheeraad ah oo ku qoran maqaal gooni ah.
Sidee sax u tahay?
Si aad u kariso karootada diirran ee cusub ee heerkulka 2 ° C ilaa 6 ° C inta lagu jiro maalinta, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u buuxiso.
Talo soo jeedin. Waxaad codsan kartaa filim yar ama polietilen ka dibna khudradda ayaa ku sii jiri doonta sawirka asaga oo aan lahayn madow, qiiqa iyo shidaalka - adoo adeegsanaya faa'iidooyinkooda jirka bini'aadamka.
Dhammaan shuruudaha lagu taliyey waa in la ilaaliyaa si karootada ay ku sii muuqdaan muuqaal muuqaal leh, iyada oo aan laga lumin dhammaan dhammaan hantidooda faa'iido leh, muddo dheer. Karootada jilicsan, biyo raaci, qallalan iyo shabaggeedii.
Ku xir khudaarta cagaaran ee bac caag ah ama bac ah, adoo u diraya qaboojiyaha. Tani, waxaad badbaadin kartaa karootada dufan leh wakhti dheer oo waa badeecad saafi ah oo loogu talagalay suxuunta, gaar ahaan maraqa iyo saladhyada, taas oo aad u sahlan xilliga jiilaalka.
Karootada la kariyey. Mid ka mid ah hababka kaydinta muddada-dheer
Iyadoo aan lagu ridin
Si loo ilaaliyo khudradda iyada oo aan la qaboojin, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto midhaha cusub oo aan ku badneyn miraha. Si taxadar leh oo gaaban u gooyaa dushooda iyada oo aan waxyeeleynin dusha sare ee xididka. Haddii karootada uu qoyan yahay, waa in la qalajiyaa.
Waxaa la rumeysan yahay in karootada, taas oo ay jirto dhul adag, sii socon doona muddo dheer, kaliya dhulka ha ku nadiifin wax adag, si aanay u sababin waxyeellada farsamada, taas oo horseedaysa burbur hore.
Digniin! Laguma talineynin in daloolka dalagga uu ku jiro miraha oo soo saaro etylene, sida tufaaxa.
Gaaskani wuxuu soo saaraa dalagga xididka si uu u dhaqdhaqaaqo. Ku nadiifi khudradda caag ama caag baco ah oo u soo dir qaboojiyaha hoose ee qaboojiyaha.
Sida loo dhigo dabacasaha cusub ee aqalka ku jira iyada oo aan lagu ridin:
Si aan u dhicin oo aan cirrid lahayn
Karootada qaboojiyaha sida heerkul gaar ah iyo sidoo kale qoyaan badan.waa faahfaahin aad u muhiim ah. Heerkulku waa inuu ka jiraa 0-2 ° C ilaa 6-8 ° C, qoyaanku waa inuu ka badnaan 90-95%.
Haddii aadan u hogaansamin shuruudahaan, dabacasaha ayaa bilaabi kara inuu biqiyo, noqdo jilicsan oo aan ku habooneyn isticmaalka dheeraadka ah adigoo lumiya dhadhankiisa iyo tayada waxtarka leh.
Qaybta hoose ee qaboojiyaha ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu keydiyo miraha iyo khudaarta. Waxaa jira in heerkulka ku haboon ee content uu ku yaal. Waxaa lagama maarmaan ah in la kala sooco khudradda nooca iyo cabbirka, ku xir qaybo dhowr ah oo loo geliyo gaaska polyetyline, sii deyn hawada xad dhaafka ah oo si adag u xir.
Bacaha baakidhka waxaa lagula talinayaa fududeynta isticmaalka. Maxay muhiim u tahay in la waafajiyo heerkulka saxda ah, iyo sidoo kale qoyaanka - si looga fogaado luminta tamarta iyo karootada. Marka lagu daro xulashooyinkan, karootiga weli waxaa lagu duuduubi karaa dhowr lakab oo waraaq ah.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha ee foomka jiiska, la kariyey, gebi ahaanba oo aan khafiif ahayn, waxaa laga heli karaa maqaalkan.
Siraha iyo khiyaamada
Waa wax aan faa'iido lahayn si aan u ilaalino khudradda khudradda ee hal sanduuq, si looga fogaado sii deynta astaamaha, taas oo markaa keenta in ay sii xumaato dhadhanka xididka.
Haddii ay jirto baahi loo qabo in lagu kaydiyo dufin ballaaran oo dabacas ah oo qaboojiyaha ku jira iyo iska ilaali dhalidda dushooda, ka jar dusha sare ee dalagga xidid by 1-2 sentimitir.
Inta lagu jiro fasaxyada, mararka qaarkood maaha wakhti ku filan oo lagu diyaariyo miiska xafladaha waaweyn, laakiin waxaad u baahan tahay inaad haysatid wakhti aad ku diyaarisid suxuuno badan iyo in ay yihiin kuwo cusub, diyaarinaya maaddooyinka horay loo sii wado, waxaa jira hab fudud oo lagu keydin karo karootada.
Qoraalka. Karootada dillaacsan waa in lagu dhejiyaa sanduuq caag ah oo leh biyo qabow oo nadiif ah - kiiskan, karootiga wuxuu soconayaa 3-4 maalmood. Haddii aad badi baddasho biyaha - waxay istaagi kartaa hal usbuuc.
Waxaad karootada ka hor marin kartaa oo diirin kartaa mid kasta oo ku duuban foorno ama warqad, si aysan u taaban khudaarta kale.
Waa inaad u hoggaansamaan shuruudaha xulashada iyo diyaarinta dabacasaha:
Ugu horreyntii, waxaa loo baahan yahay kaydinta si loo doorto miraha dalagga ugu wanaagsan ee nooca, cabbirka, gobolka. Ku guuldareysiga inaad u hoggaansanto tallaabooyinkan bilawga ah - waxay noqon kartaa dabiicada khalkhalka degdegga ah ee khudradda.
Diyaarinta qasabka ah ee karootiga ka hor inta aan loo dirin kaydinta. Si aad u dhaqdo, nadiifiso ama u xoqdo wasakhda asaasiga ah, guud ahaan, dukaanka ama la jarjarey, iyo sidoo kale jiiska - qof kastaa wuxuu doortaa nolol haboon iyo waqti dheer. Ku rid bac caag ah isla markiiba, dabeylka oo dhan hawadu waa fiican tahay. U dir siinta kaydinta sanduuqa hoose ee khudaarta ama qaboojiyaha.
Xilliga xagaaga, dabacasaha waxaa laga heli karaa suuqa cusub iyo guriga-keliya oo keliya beerta iyada oo aan lagu buufineynin walxaha waxyeelada leh. Xilliga jiilaalka, dabacasaha waxaa laga heli karaa dukaamada dukaanka laga keeno dibedda oo aan la ogayn wixii shuruudo ah ee ay soo korodhay iyo waxa la rusheeyey dhammaan noocyada cayayaanka iyo koritaanka degdegga ah ee iibka qiyaas ballaaran.
Si aad uga fogaato cunidda khudradda aadka loo dhoofiyo suurtagal in la kaydiyo ilaa jiilaalka leh karootada cusub ka soo beertaoo ku kaydi dabacasaha guriga aqalka ku jira muddo dheer oo ku jira qaboojiyaha.
Maanta waa mid aad u haboon iyo faa'iido leh markaad ka heli karto khudradda cusub laga bilaabo qaboojiyaha maalinta jiilaalka iyo ku dar maraqa aad ugu jeceshahay ama saxan kale. Talooyinka kor ku xusan waxay caawin doontaa in la keydiyo jiilaalka ma aha oo kaliya karootada, laakiin sidoo kale xididdo, iyo sidoo kale khudradda kale ee xididka.